Arabeyes : Tsy Rototra tamin’ny Fifindran’i Magdi Allam ho Katolika ny Mpitoraka Blaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Marsa 2008 9:47 GMT
Maro ny olon-dehibe nifindra Katolika ary nataon'ny Papa Benedict XVI Batemin'ny tamin'ny faran'ny herinandron'ny Paka teo. Isan'ny natao Batemy tamin'izany i Magdi Allam, Silamo, teratany Ejypsianina, nonina tao Italia nandritra ny antsasaky ny fiainany mahery, ary fantatra koa fa mpitsikera ny “Silamo iringiriny”. Na dia “Silamo be” aza no nilazan'ny mpanao gazety maro azy, dia nilaza izy fa tsy mpanaraka ny fombafomba Silamo. Naneho ny heviny ny mpitoraka blaogy tamin'ny fifindran'i Allam ho Katolika. Egyptian chronicles manokana dia tsy nametraka olana :
Tsy tena nalaza na nanan-danja be taminay akory io lehilahy io.Tsy misy olana amiko mihitsy raha nivadika Kristianina izy na izay fivavahana hafa inoany, olon-dehibe izy ary afaka mandray ny fana-paha-keviny. Tsy silamo be koa izy, ary amiko dia tsy mpino akory izy talohan'ny nanaovana Batemy azy. Tsy nivavaka izy, tsy nifady hanina, tsy namonjy ny fietahana masina tany Mecca miaraka amin'ny reniny izay tena miaina ny finoany tokoa “Tsy haiko izay mety ho eritreretiny amin'izao zavatra mitranga izao, fa amin'ny maha Ejipsiana dia azoko antoka fa manohina azy io.”
Azo antoka fa hiseho ireo mody hoe Silamo iringiriny ary hilaza hoe andao vonoina izy mba handrehetana indray ilay lazaina fa loza entin'ny Silamo ao Eropa.
Amiko dia tokony tsy hovoizin'ny mpanao gazety ity, araka ny efa voalazako hoe olona afaka manao izay tiany izy, misy zavatra hafa tokony ho resahina kokoa noho ity raharaha ity.
I Sandmonkey, avy any Ejipta koa, dia milaza fa atahorana hisy handroba i Allam
Nanapa-kevitra ny hifindra Katolika tamin'ny Paka, teo anatrehan'ny Papa mihitsy, ny Ejipsiana-Italiana ao Italia izay mpitsikera ny finoana Silamo ary mpanohana ny Israely. Yeah. Hmm..raha misy Katolika mamaky ity blaogy ity, dia fotoana tokony hivavahana ho an'io lehilahy io angamba izao. Mila vavaka izy !
Betsaka no namaly io lahatsoratra io. Izao no nolazain'i K-2
Antenaiko fa isan'ny tsara indridra ny polisy mpiambina azy : taloha mantsy dia tsy nahavita niaro ireo olo-malaza tamin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro na mafia ny polisy Italianina.Amin'ny lafiny iray koa dia ho araraotin'ny mpanohitra ny Silamo sy ny mpifindra-monina izao hampielezana ny hevitra manohitra ny Silamo noho ny La Lega del Nord (the Nothern League, antoko mpampisaratsaraka sy mpanavakavaka)
Izao kosa no nolazain'i Sewage Soup :
wow notapahina mihitsy ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra italianina mba handefasana ity vaovao amin'ny nanaovana batemy azy ity … raha nanao izany ny Silamo isaky ny misy olona malazalaza mifindra silamo … tsy hanana fotoana handefanana ny horonan-tsarin'i bin laden intsony izy ireo.
Mampametra-panontaniana an'i My Egypt, mitoraka blaogy avy any Ejipta, koa ny mety ho tanjon'ny Papa :
Raha tena fiainana manokana tokoa dia nahoana no amin'ny Sasakalin'ny Paka no ataon'ny Papa Batemy ny olona iray ? Fa maninona no tsy natao tany amin'ny Fiangonany ? Nahoana no omen'ny Vatican lanja be toa izao ny fifindran'ny olona “malaza” ho Katolika ? Toa hitan'ny [Papal propagance machine] hararaotina ity fifindrana ho Katolika ity hampiharihary ny “Fahendrena” Katolika manoloana ny Silamo. Raha izany nefa, dia nahoana izy ireo no milaza fa fiainana manokana ny fifindrana finoana sy ny finoana ?Ny zava-misy dia mandiso hevitra ireo tsy mahafantatra ny finoana Silamo izy ireo. Tsy finoana hifindranao irery ny Silamo fa fomba fiainana ekena am-pahalalahana ; ary raha tsy manaiky izany ny olona iray dia tsy tena Silamo.
Farany, tsy dia manisy olana amin'io fifindrana ho Katolika io koa i A Moro in America, avy any Morocco :
Tsy mbola nahare mikasika ity Italianina Magdy Allam, izay lazain'ny Reuters fa Silamo malaza ity aho. Natao Batemy tao amin'ny Vatican ny “Silamo Malaza nifindra finoana” hoy ny Reuters. Lazaina moa fa mpitsikera ny Silamo iringiriny ary mpanohana ny Israely.
Izao no hevitra iray tao amin'io lahatsoratra io :
Tsy azo ekena mihitsy ny fomba handrangitan'ny Papa ireo rahalahy Silamo sy mpiray tanindrazana. Tsy vao voalohany izy no nanao toa izao. Tsy azoko leferina mihitsy izao.
Sary nalain'i giando, arovan'ny Creative Commons.